Wararka - Ku dhowaad 100 Soo-saarista Wadajirka ah ee Kiimikada Weyn, Waxyaabaha Ceyrinta ah ee Mar kale Soo Kordhaya
Tan iyo bilowgii sanadka, taayirka, kiimikada, birta, bacriminta kiimikada iyo wixii la mid ah ee kor u kaca qiimaha wadajirka ah, shirkadu si weyn ayey saameyn ugu yeelatay, faa'iidada badeecada ayaa si aad ah loo cadaadiyey …… Qiimaha alaabta ceyriinka ah ayaa isbadashay.
Ku dhowaad 100 shirkadood oo kiimiko ah ayaa joojiyay wax soo saarkoodii, iyaga oo cayna ugu daray dhaawaca!
Wareeggii ugu dambeeyay ee kororka wuxuu sababay in shirkado badan ay dhibtoonayaan, iyaga waxaa ka mid ah, keenista suuqyada kiimikada iyo dalabku si dhab ah uma dheelitirnayn. Dhawaanahan, wararka sheegaya in ku dhowaad 100 shirkadood oo hormuud u ah warshadaha kiimikada ay si wada jir ah u joojiyeen wax soo saarkii ayaa saameyn xoog leh ku yeeshay suuqa kiimikada, oo laga yaabo inay raacdo wareeg cusub oo qiimaha kor u kaca ah.
Ku dhawaaqista ku dhowaad 100 shirkadood oo kiimiko ah oo ku lug leh PE, bisphenol A, PC, PP iyo kiimikooyin kale .Waxaa la fahamsan yahay in wax soo saarka shirkadaha, qayb ka mid ah shirkadu ay qayb ka tahay dayactirka qalabka, sidoo kale waxaa jira qayb ka mid ah joogsiga buuxa dayactirka, waqtiga dayactirku waa qiyaastii 10-50 maalmood. Isla mar ahaantaana, shirkadaha qaar waxay si toos ah u yiraahdeen "liistada dheeraadka ahi ma badna, wayna jabi doontaa"!
Dayactirka warshad balaaran, wax soo saarkii hoos ayuu udhacay, sahayda alaabta ceyriinka ah way ka dhib badan tahay, argagaxa wuxuu bilaabay inuu qallajiyo …… Intaa waxaa dheer, in qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee warshadaha ay horey u kordhiyeen qiimaha, sidaa darteed waxay umuuqataa in bilowga wareega cusub ee qiimaha uu sare u kacay uu yahay hubaal
Maaddaama dalabku sii kordhayo, mawjad cusub oo kor u kac ah ayaa laga yaabaa inay jidka ku sii socoto
Xaqiiqdii, wareega cusub ee kor u kaca qiimaha ma ahan qaab dabiici ah, laakiin isbeddelka The Times Waa in la sheegaa in sicir bararka sicir bararka uu si buuxda uga muuqdo kor u kaca qiimaha badeecadaha waaweyn, oo xitaa waxaa loogu yeeraa " badeecadaha ugu dhaqsiyaha badan ayaa kordhay tan iyo qarnigii 21aad ”.
Markii hore, sare u kaca qiimaha alaabta ceyriinka ma aysan keenin argagax badan.Machaddo badan ayaa kaydiya alaabta ceyriinka ah kahor Iida Guga si ay u sii socdaan in muddo ah, sidaa darteed warshadaha badankood wali waxay sugayaan inay iibiyaan markii qiimaha hoos loo dhigo. Waqtiga ka dib, shirkado badan oo kor u kaca ah oo xad dhaaf ah, waxay ahayd inay qiimaha jaraan.
Si kastaba ha noqotee, waqtigan, suurtagalnimada wareeg cusub oo kor u kaca qiimaha alaabta ceyriinka kiimikada ah ayaa wali aad u ballaaran, sababtuna waa mid aan laga sooci karin koboca dalabka iyo dhaqaalaha.
Marka hore, dhaqaalaha adduunku si dhakhso leh ayuu u soo kabanayaa oo baahida loo qabo kiimikooyinka iyo alaabada kale ayaa sii kordheysa.Marka labaad, marinka $ 1.9 tirilyan ee xirmada kicinta Mareykanka iyo sicir barar ka sareeya midka la filayo ayaa u badan inuu sare u qaado dalabka waaxda maaliyadeed.
Gelitaanka Maarso, shirkadaha badankood waxay bilaabeen shaqo midba midka kale, baahida waxsoosaarka ayaa sii kordheysa, sahaydu waxay noqon doontaa dhibaatada ugu weyn, wareega cusub ee kororka ma foga.
Kordhinta qiimaha soo socda waxay ku xiran tahay inay saameyn weyn ku yeelato suuqa iyo shirkadaha mar labaad, shirkadaha yar yar ee macaashkoodu hooseeyo ayaa laga yaabaa inay ka baxaan marxaladda warshadaha, kuwa ka badbaadaana waxay noqon doonaan kuwa xoog badan!